Ayikho lento yethu, noma besivele asangaya nje kuma-Olympics
July 29, 2021 Impempe.com
Uyabona uma kukhulunywa ngokuhambela ubala kuma-Olympics aqhubekayo njengamanje eJapan, kusuke kukhulunywa ngeqembu laseNingizimu Afrika lonke nje.
Ngiyazi labo abathanda ibhola basaziphoxelwe yiqembu lika-Under 23 kodwa iqiniso nje ukuthi bonke abakuleli abamele izwe eJapan bazishayela udaka nje. Futhi bamoshe imali yethu.
Nakuba siyakhuluma sibonga ababhukudi nabe-surfing abasahloniphise isimo ngokuthola izindondo. Ngike ngiphaphame ekuseni ngizame ukubuka imidlalo ehlukene esuke isakazwa kwithelevishini.
Ngithi qu kwi-hockey, ngifice isho induku eqenjini laseNingizimu Afrika. Ngidlulele kwi-water polo nakhona ngifice ihlazo, besimele ngesibhaxu. Ngithi lungu kwezamabhayisikili hhayi khona, nakhona asiliboni elidlalayo.
Kulokhu kubheda kakhulu ngoba noChad le Clos akenzi kahle nokuyinto ezoshodisa izindondo zethu. UCaster Semenya akekho kule midlalo nokuchaza ukuthi ayikho indondo ezoba khona kwi-800m.
Uma kwenzeka kuqhamuka mgijimi noma umshayisibhakela onekhono, kusuke kuyinhlanhla nje
Iqembu lakuleli leRugby Sevens lishaywe kuma-quarterfinal kwaphela kanjalo ngethemba lendondo ebholeni lombhoxo. ULuvo Manyonga akabonwa ngakho asikho nesidingo sokulunguza kwiLong Jump.
Angisafuni nokubeka ithemba kubasubathi bethu ngoba kubukeka sengathi kuyeza nje okunye ukuphoxeka. Yebo bakhona oWayde van Niekerk no-Akani Simbine kodwa angazi noma zikhona yini izindondo okumele sizibheke lapho.
Empeleni nje iqiniso okumele sibhekane nalo ukuthi ngeke sikwazi ukubuya nezindondondo eziyishumi eTokyo. Umbuzo omkhulu okumele sizibuze wona ukuthi yikuphi lapho sishaya into ecokeme khona uma kukhulunywa ngezemidlalo?
Ngabe ukuphelelwa yisikhathi kwabadlali noma abagijimi abafana noSemenya kusho ukuthi sizosala simunca iminwe uma kukhulunywa ngama-Olympic Games noma amaCommonwealth Games?
Kanti thina asinalo yini uhlelo lokukhulisa oLe Clos bakusasa ukuze singahlazeki esikhathini esizayo? Ngiyazi zinzima izimpendendulo kule mibuzo kodwa kukodwa nje engikubona kusidicilela phansi njengezwe.
Inkinga yethu enkulu ukuthi wonke umuntu udonsa ubhekisa lapho ethanda khona, akukho ukubambisana. Uma kwenzeka kuqhamuka umbhukudi, umgijimi noma umshayisibhakela onekhono, kusuke kuyinhlanhla nje.
Kusuke kungekhona ukuthi yingoba sizihlupha ngokuthola ikhono bese silelusa ukuze siziqhenye ngalo kusasa. Ezemidlalo zife nya ezikoleni zethu futhi lokhu kubukeka sekuyinto engeke iphinde ilungiseke.
Uma ngithi ‘ezikoleni zethu’ angiyibali indaba yasezikoleni lapho kufunda khona abadla izambane likapondo. Ngeke sithembele ekutheni abadlali abafana no-Aphelele Fassi, Lungi Ngidi, Kagiso Rabada, Akani Simbine nabanye, siyoze sizwe ngabo ngoba nakhu abazali babo bekwazi ukubasa ezikoleni ezibizayo.
FUNDA NALA: UMahlambi ngeke aliswele iqembu azodlala kulo uma echithwa kwiSundowns
Indlela ezife ngayo ezemidlalo ezikoleni zethu, ngisho unobhutshuzwayo usuphele nya okungumdlalo esiwuthatha njengowabamnyama. Singafika kanjani sishaye into ecokeme emiqhudelwaneni yomhlaba uma kumele sibe nemali eshisiwe kuqala ukuze kugqame ikhono esinalo?
Imali le eyinkinga ongakaze uyibone kule Ningizimu Afrika yethu! Thina sisazoba yihlazo emhlabeni futhi ngelinye ilanga ngeke silubhade kwakhona kuma-Olympics.
Sishoda ngabantu abazofike basenze siziqhenye njengezwe. Ifile indaba yethu uma kukhulunywa ngezemidlalo. Futhi siyogcina sesiwezwa ngendaba nama-Olympics uma kuhamba kanje. Shwiii!!
Previous Previous post: Ziningi izesheli ezibheke ukuthi uMahlambi ahlukane neSundowns zigxume
Next Next post: ICity ifuna indebe nokuqeda phezulu kwilogi ngesizini ezayo